Diyaarad Helikobtar uu lahaa Milkiilaha naadiga Leciester City oo burburtay… – Hagaag.com
Diyaarad Helikobtar uu lahaa Milkiilaha naadiga Leciester City oo burburtay…
Posted on 28 Oktoobar 2018 by Admin in Sports // 0 Comments
Diyaarad Helikobtar oo uu lahaa milkiilaha Leicester City ee Ingriiska ayaa ku burburtay meel la dhigto gawaarida oo ka baxsan garoonka lagu ciyaaraha ee kooxda, kadib markii ay ka kacday garoonka dhamaadka ciyaar halkaasi ka dhacday.
Weli ma jiro war rasmi ah oo ku saabsan halka uu ku dambeeyey maalqabeenka leh kooxda ee u dhashay Thailand Vichai Srivaddhanaprabha, laakin ilo ku dhow qoyskiisa ayaa sheegay in milkiilaha Leicester uu la socday diyaarada.
Leicester City ayaa la ciyaartay West Ham United tartanka Premier League ee Ingriiska oo lagu ciyaaray garoonka King Power.
Sawirada laga qaaday goobta ayaa waxay muujinayaan olol aad u weyn oo ka dhacay goobta gawaarida la dhigto, inkastoo ay mar dambe la damiyey, sida ay sheegayaan wararka.
Afhayeen u hadlay booliska degmada Leicestershire ayaa sheegay in adeegga gurmadka degdegga ah uu hadda ka shaqeynayo dhacdada ” shil diyaaradeed oo ka dhacay halka baabuurta ladhigto banaanka garoonka.”
Naadiga Leicester City ayaa waxa ay sheegtay in ay ka caawini doonto booliska iyo adeegyada gurmadka deg dega ah waxayna soo saari doonaan hadal faahfaahsan waqtiga ku habboon.